MIISAANKA QANDHADA EE UKUNTA DIGAAGGA EE KINIISADA - KUFSI
Ukunta ukunta digaaga ee guriga waa mid aad u xiiso badan, laakiin waa dhibaato. Si aad u hesho caafimaad qabta, qalafsanaan, caruur macaan leh waqtigii loogu talagalay, waa inaad si adag u raacdaa xeerar dhowr ah oo aad ka heli doonto maqaalkeena. Waxaan si faahfaahsan u faahfaahin doonaa dhammaan habka qashin-qubka, iyada oo laga bilaabo xulashada iyo soo-gelinta walaxda qalabka, oo ay ku dhammaato dhalashada guushu ku raaxaysanayso shimbiraha yaryar.
Xulashada iyo kaydinta ukunta
Doorashada habka saxda ah ee loogu talagalay kobcinta ayaa muhiim ah, waxay ka kooban tahay 50% guusha, sababtoo ah xitaa haddii aad bixisid geedi-socodka wakhti badan oo wax kasta oo sax ah, ukumo hore loo qaato, wasakh ah ama si aan caadi ahayn u qaabaysan, waxay yareeysaa fursadaha helitaanka caafimaadka misigta. Ukunta qallalka ayaa la qaadi karaa oo la kaydin karaa muddo aan ka badnayn 5 maalmood kaddib marka digaaggu hoos u dhigo. Waa in lagu keydiyaa xaalad nadiif ah, oo leh qol hawada - oo ah, oo leh wareega wareega - kor ugu kacda, xaaladaha heerkulka 10-12 ° C.
Baro naftaada shuruudaha taranka dhalmada adoo isticmaalaya kobcin.
Ka dib qaboojiyaha, maaddadu waa mid aan ku haboonayn. Halkan waxaa ku qoran liisyo kala duwan oo aan kugula talineyno inaan tixgelinno markaan xulashada caruur caafimaad leh:
Waa muhiim! Si aad uhesho qolofka nadiif ah, meel daaqada u jiifiso ukunta, horay u buuxsanto balka nadiifka ah. Waa habboon in la badalo inta badan, illaa digaagga uu ku qasmay.
Nadiif. On dusha sare ee qolof wuxuu leeyahay microflora u gaar ah, kaas oo waa in lagu keydiyaa inta lagu jiro mudada dhan burinta, sidaa daraadeed ka hor inta aan la dhigin si aan waa in aan la dhaqay. Marka ugu horeysa dooro nadiif nuqullo ah nuqullo suurtagal ah, xaaladaha ba'an, waxaad si tartiib ah ugu tirtiri kartaa maro qallalan.
Cusbo Sidii horayba loo sheegay, xiniinyuhu waa in uusan ka badnayn shan cisho, sidaa daraadeed waa in naaska laga saaraa shuruudaha naqshadda.
Kiniin. Qalabka ceeriin ee tayo sare leh waa in aanad lahayn wax cad, ciriiri, ur xun. Dulqaad - cufur yar, caleemo "dhadhan".
Xaaladaha ku haboon ee kaydinta. Dhamaan walxaha cayriin ee aan si fiican loo kaydineynin ma shaqeynayaan kobcin.
Nidaamka oval saxda ah. Tijaabo ku habboon waa in uu yeesho qaab isku dhafan, mid yar oo hal dhinac ah. Qodobbo isku dhejisan ama dheer oo dheer waa in la geeyaa.
Cabbirka caadiga ah. Ma aha lagama maarmaan in la qaato wax aad u yaryar - chicks daciif ah ayaa ka dillaaci doona, ma ahan lagama maarmaan in la doorto mid aad u weyn - waxaa jiri kara laba xabbo oo ku jira. Miisaanka ugu fiican ee ukunta joogtada ah waa inuu yahay 50-60 g.
Dhaawac jirka ah oo aan haysan. Iska hubi in qolofku uu yahay mid degan, aan lahayn dildilaacyo iyo qoob ka ciyaaro.
Calaamadee ukumaha ka hor intaanad ku dhicin maskaxda, waxaad sameyn kartaa xayawaan isku dhafan.
Ayadoo ay ku iftiiminayaan qolofka adoo ku dheggan, waa inaad ku dhex aragtaa gudaha saddex xaaladood oo caafimaad oo waaweyn:
hal wareeg oo sarreen, oo ku yaal bartamaha, adigoon taaban darbiga;
qolka hawada ayaa jirta, xajmiga shaaha (aan ka badaneyn) oo ku yaal saldhigga xayawaanka;
Midabka ukunta ma keeno shaki: waa nalka, dharka, oo aan lahayn dhibco iyo xariijimo.
Ma taqaanaa? Dabeecadda ayaa sheegaysa in hen, ukunta ukunta, ay iskeed isaga saari karto qaar ka mid ah buulkeedii, iyada oo ay ku kalsoon tahay. Tani waxay soo jeedinaysaa in digaaggu uu og yahay in ukunku uu yahay mid aan cillad lahayn, oo macnaheedu maaha in uu ku soo boodo, maadaama aan laga helin chick caafimaadka leh.
Shuruudaha iyo shuruudaha loogu talagalay isugeynta
Tan iyo markii aad gelisay chicks mustaqbalka ee ku-naqshad - muddada kaboojinta bilaabay. Weli lama samayn digaagga iyo cambaareynta, waa 21 cisho. Ka hor intaadan bilaabin nidaamka, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso wax walba. Marka hore, qalabku waa inuu si fiican u nadiifiyaa, fayodhowr iyo nuugid.
Marka labaad Waxay u fiicantahay inaad ku calaamadiso hal dhinac oo ah ukunta (nacas ama fiiq - maaha mid muhiim ah), tusaale ahaan, iskutallaabta. Tani waxaa loo qabtaa si sahlan, si aadan u jahwareersaneyn markaad mustaqbalka soo celiso.
Markaad diyaarinayso masraxa, qalabka loo yaqaan 'bookmark' waxay joogi kartaa heerkulka qolka ilaa 7 saacadood. Tani waxay ka caawineysaa inuu si siman u kululaado dhinac walba. Ka dib markii "dejinta" ee chicks mustaqbalka ee qalabka, heerkulka ee naqshadda for ukunta waa in ay gaaraan gudaha 2-3 saacadood ee hore 37 ° C. Mustaqbalka, sida waafaqsan tilmaamaha, si joogto ah ayuu isbeddelayaa.
Ma taqaanaa? Waxaa jira qaboojiyeyaasha leh baayacmushtar leh qalab ukunta toosan. Waa mid aad u haboon, waxay u ogolaaneysaa in uusan furin qalabka marka la rabo inuu sameeyo.
Hadda waxay billaabmaysaa waqti dheer, xannibaad iyo waqti isku mid ah habka xiisaha iyo dhisidda nolosha cusub ee shimbiraha yar yar.
Habka loo yaqaan 'Egg incubation'
Si muuqaal ahaan loo muujiyo sawirka nidaamka heerkulka, iyo sidoo kale nidaamka qoyaanka, soo noqda iyo hawo-gelinta bilowga ilaa dhamaadka qandhada ukunta digaaga, waxaa lagu siinayaa miis gaar ah.
Muddada Taariikhaha, maalmaha Xaaladaha heerkulka Heerka qoyaanka Egg rogid Hoos-u-dhiska
1 1-11 37.8 ° C 60-65% 6-7 saacadood kasta -
2 12-17 37.6 ° C 55% 4-6 saacadood kasta 2 jeer 5 daqiiqo
3 18-19 37.3 ° C 48% 6-7 saacadood kasta 2 jeer 20-25 daqiiqo
4 20-21 37 ° C 65% - 2 jeer 5 daqiiqo
Sida aad arki karto, geeddi-socodka oo dhan wuxuu u qaybsamaa afar xilli oo mid waliba wuxuu leeyahay tilmaamihiisa heerkulka iyo qoyaanka.
Wixii shimbiraha shimbiraha ah, waxaad samayn kartaa kiniin ka baxsan qaboojiyahaaga naftaada.
Intaas waxaa sii dheer, ukunta iyo hawada ukunta sidoo kale ma aha maalin kasta. Hawlgalka qandhada waa in si joogto ah loo hubiyaa, ilaa 5-6 jeer maalintii.
Waa muhiim! Haddii qalabku uu ku guuldareysto oo uu ku sii jiro foomkaan muddo ka badan 4 saacadood, chicks ayaa dhiman doona mana jiri doono qashin.
Isku habboon, soo saarid wax soo saar oo ukumo digaag ah waxay u baahan tahay raacitaan adag oo ku aaddan dhammaan hababka soo noqnoqda ee lagu muujiyay miiska.
Maalinta labaatanaad ee xilliga kulaylka, waxaad filan kartaa muuqaalka shimbiraha yar yar. Waxay qaadan doontaa 5 ilaa 7 saacadood si ay u soo baxaan oo gebi ahaanba uga takhalusaan qolofka. Ka dib marka digaagu uu "dhasho" oo gebi ahaanba la qalajiyo kuleylaha, waxaa loo wareejin karaa xannaaneyn ama sanduuq kartoon oo leh santuuq.
Maalmaha ugu horreeya heerkulka sanduuqa waa in lagu hayaa 33-35 ° C, maalinta saddexaadna waxaa lagu dhimi karaa 29 ° C. Tartiib tartiib ah, guurka ayaa loo isticmaali doonaa heerkulka qolka.
Waxaad xiiso u yeelan doontaa inaad ogaato sida loo koro poults turki, boodh iyo ducklings ee kululaynta.
Chicks yar yar ayaa aad ugu nugul cudurada iyo fayrasyada kala duwan. Si looga hortago dhimasho sare, dad badani waxay ku taliyaan in ay dhalaan antibiyootiko laga soo bilaabo dhalashada, ama ugu yaraan daciif ah oo ah qufac caloosha.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkeena, talooyin, iyo sidoo kale miiska qaboojinta ee ukunta ee incubator kaa caawin doonaa inaad soo saarto mid caafimaad qaba, xoog leh, chicks caajis, taas oo marka dambe, digaagga wanaagsan koraan.